Bernard Minier. Kuongorora kwezvakateedzana naMajor Martin Servaz | Zvazvino Zvinyorwa
Bernard Minier. Kuongorora kweakateedzana naMajor Martin Servaz
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 29/04/2021 12:00 | Vanyori, Nhema nhema
Bernard Minier, rimwe remazita makuru mu polar french, yakaburitsa bhuku idzva zuva rekupedzisira 1. Izvo ndezve Kuvhima (Kuvhima) uye chikamu chechitanhatu chinotaridza chisikwa chayo chakakurumbira, mutungamiri Martin Servaz. Asi ... zvakaburitswa munyika dzeGallic, parizvino, uye apa tatova kunonoka izvi neyakare, Mupata (Mupata). Zvakakodzera izvi kudzokorora kwezvakateedzana yemapurisa ako anozivikanwa kupa mukana wekutarisa uye kuti ivo nekukurumidza vanosvika kune vako vaverengi vakazvipira pakati pavo vandinoverenga ini.
2 Martin Servaz akateedzana
2.1 Pasi pechando
4 Usadzime mwenje
Bernard Minier akaberekerwa muBéziers muna 1960. Aizove chiremba uye akashandawo kuCustoms Service asati azvipira zvachose kumabhuku. Muna 2011 akaburitsa Pasi pechando, yekutanga yemanoveli matanhatu ayo nyeredzi Martin Servaz, uye kubudirira kwake kukuru kwakamuendesa kumusoro kwe thriller ChiFrench chepfungwa, uko kune vashoma kupfuura vakakurumbira vanyori. Izvi zvinotevera Denderedzwa, usadzime mwenje, husiku uye izvo zviviri zvasara kusvika pano. Uyes iye chete-wenguva mbiri anokunda iyo Polar Mubayiro paCognac Festival uye basa rake rakashandurwa munyika makumi maviri uye akatengesa anopfuura mamirioni maviri emakopi.
Hunhu hwake hunonyanya kuzivikanwa ndihwo Martin Servaz, mutungamiriri we Toulouse mapurisa. Hunhu hwake, kutsunga uye tsitsi, pamwe ne kuvhura kusimba kwemanzwiro chibereko chekubata kwake kukuru kwenyanzvi, vakamushandura kuva imwe yevanonyanya kuteverwa yemhando.
El zvose vakakomberedza Servaz vanozadza yavo mwanasikana uye a midziyo yeshamwari uyo unaye kune zvakanaka nezvakaipa. Uye zvakare yake Nemesis, psychopath isingakundike iyo inomutevera isingaregi. Asi haatomboshaya kutsunga kukurira kutya kwake uye kuzviita nemazvo.
Nhevedzano ye Martin Servaz
Chekutanga zita rakaiswa muna Zvita 2008 uye nekunaka kwemupata wakadzika muPyrenees uko, pavanenge vachienda kubasa, vashandi veimwe nzvimbo yemagetsi vanowana magetsi mutumbi webhiza risina musoro. Servaz ndiye anotarisira iyo kuferefeta kunoratidzika kunge inyaya isinganzwisisike pabasa rake rese. Asi zvese zvinoratidza kuti uku ndiko kutanga kwehusiku hwakareba uye hunotyisa umo psychopath ine ngozi iri kumashure Julian Hirtmann.
Yakava kugadzirisa terevhizheni umo Charles berling Akaisa kumeso kwake, nechikamu chemafungiro pakati peveruzhinji, kunyanya icho chinyorwa.
Pano Servaz anobata ne kuponda kwakaipisisa mutaundi diki rekoreji kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweFrance, uko muvakidzani anosheedza mapurisa achiyambira kuti murume wechidiki akagara pedyo nedziva remufi, iro rizere nezvidhori zvinoyangarara. Izvo Young, uyo anoita kunge ndiye chete anofungidzirwa, ndiye mwana wega waMarianne, rudo rukuru rwaServaz uye izvo zvaasina kuona kweanopfuura makore makumi maviri.
Mushure meiyo hombe kupfura kutambura pamagumo ezita rapfuura, Servaz anga ari kuiswa mukati yemapurisa, iri kunetseka kuti ipfuure. Asi rimwe zuva anogamuchira mutsamba kiyi yehotera kamuri umo muimbi akazviuraya gore rapfuura. Iyo fungidziro inomutungamira kuti aongorore ari ega panguva imwecheteyo semutapi venhau, Christine Steinmeyer, uwanewo tsamba yekuzviuraya.
Vaviri vachasangana y vanozozviona vave nechekuita nemamiriro ezvinhu anowedzera kusanzwisisika anozokanganisa mamiriro avo epfungwa asina kusimba.
El kuuraya mukadzi wechidiki muchechi kuchamhembe kwe Norway tora mumiriri Kirsten nigaard, wemapurisa eOslo, kuti aongorore pane rig yemafuta muNorth Sea. Ikoko anowana kuti mumwe wevashandi atiza achisiya akateedzana ezviratidzo zvinonongedza Servaz. Nigaard achasvika muFrance kuti azobatana naye mu tsvaga uye tora izvo zvinoita kunge zvine mutsindo nezve psycho hirtmann, kamwe zvakare kumashure kwekuipisisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Bernard Minier. Kuongorora kweakateedzana naMajor Martin Servaz
Hupenyu hwekunyepa hwevakuru